Suxufiyin ka howlgala magaalada baydhabo oo tababar loo soo xirey | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Suxufiyin ka howlgala magaalada baydhabo oo tababar loo soo xirey
Maanta waxaa lagu soo gabagabeeyay Magaalada Baydhabo tababar socdey labo maalmood oo ku saabsan habraaca saxaafadda ee loo tabiyo tacadiyada ka dhanka ah Jinsiga kaas oo loo qabtay 50 saxafi.
Tababarkaan oo ah wajigii labaad ayaa waxaa soo agaasintay wasaaradda Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqda Aadanaha XFS waxuuna socday 2 maalmood 16 ilaa 17 bisha June ee sanadka 2021, iyadoo u jeedkiisuna ahaa sidii suxufiyiinta loo bari lahaa habraaca saxaafadeed ee tabinta tacadiyada Jinsiga la xiriira. Wajigii koowaad ee tababarkan waxaa la qabtay sanadkii hore 2020.
Madaxa Qeybta Qorsheynta wasaaradda Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqda Aadanaha, Mudane Bakar Asta Rufaci, ayaa xiritaanka tababarka ka sheegay in tababarkan ay muhiimad gaar ah u leedahay Wasaaradda sidoo kale ay kor u qaadeyso xirfadda hab tebinta wariyaha ee ku saabsan kiisaska ku saleysan tacadiyaea jinsiga. Waxa uu mudanaha intaas ku daray in tababarada noocaan ah ay Wasaaraduu ku qaban doonto meelo kala duwan si suxufiyiinta loo baro habraaca saxaafadeed ee tabinta xadgudubyada la xiriira Jinsiga.
Tababarka waxaa iska kaashaday wasaaradda Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqda Aadanaha XFS iyo hey’adda UNPFA, iyadoo khabiir saxaafadeed oo ka socda ururka saxafiyiinta NUSOJ uu bixinayay casharada.
Ugu dambeyn Wasiir kuxigeenka Wasaaradda Warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Maxamed Aadan Maxamed ayaa soo xirey tababarka asagoo u tilmaamey suxufiyiinta muhiimada ay tababarkan u leedahay Saxaafadda.